FAYYAA – OROMO TECH
FINNIISA AKKAMITTI BALLEESSINA?
FINNISA ( ACNE VULGARIS) by DR KD Finnisni rakkoo gogaa irratti mul’atu yoo tahu xannacha gogaa keessatti argamu afaan ingiliffaan ‘sebaceous gland’ kan jedhamuun wal qabata. Finnisni mallattoo dargaggummaa tahee […]
By oromotech Posted on June 3, 2017
FORFORII AKKAMITTI UFIRRAA BALLEESSINA?
FOROFORII (Subhoerric dermatitis) Foroforiin dhukkuba gogaa kamiyyuu caalaa hawaasa keesatti argama, umurii hundaa huba, takka ni dhufa takka ni deema malee guutummaatti qoricha takkaan hin dhiisu. 1. Shaampoo qabiyyeewwan kana […]